Home » Featured » Postium Korea, Ltd. dia manambara ny mpaninjara vaovao ho an'i Amerika
Postium Korea, Ltd., mpanamboatra sy mpanamboatra vahaolana momba ny fanaraha-maso amin'ny fandefasana horonantsary amin'ny famoahana sy famokarana sarimihetsika, dia faly manambara ny fanendrena ny Postium America ho solontenany manokana ho an'i Amerika Avaratra sy Atsimo. Postium America dia hanome tari-dalana momba ny fifantenana ny vokatra sy ny fampidirana ary manolotra vokatra avy amin'ny mpiara-miasa mpanome fanampin-tsolika manerantany manerana an'i Amerika.
"Faly izahay manana ny ekipa Postium America hiara-hiasa amin'ny fanitarana ny marika maneran-tany" hoy i Sung Il Cho, filohan'ny Postium Korea, Ltd., "Manana traikefa goavana izy ireo amin'ny fampitana mivantana ny fivarotana sy ny fivarotana ary ho loharano lehibe ho an'ny mpivarotra sy mpanjifa."
Ny CEO Postium America, Tim Giraldin sy ny VP Sales & Marketing, Wes Donahue, dia nanolo-tena hampihatra ny traikefany sy ny fahalalany momba ny vokatra miaraka amin'ny fomba fitantanana mpanjifa mba hanitarana ny tsenan'ny tsena amin'ny marika Postium.
"Fotoana tena mahaliana ity." hoy Wes Wesue, "Ny indostriantsika dia miova amin'ny modelim-pitaovana vaovao sy ny zavatra hafa azo ampiharina kokoa noho ny teo aloha. Ny teknolojia vaovao tahaka ny HDR sy 4K dia manova ny fomba hanambaran'ny mpamorona ny votoatin'ny famoronana ary Postium America dia manolotra karazan-tsarimihetsika manintona be sy manintona, mba hahazoana antoka fa haverina amin'ny fomba feno ny fahitana azy ireo. "
Hatramin'ny nananganana azy tao amin'ny 1999, Postium Korea dia mpandraharaha matihanina amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao, sary mihetsika ary studio ho an'ny orinasa manerantany. Nandritra ny folo taona dia nifampizara teknika ara-teknika izy ireo ary nampidirina mivantana avy amin'ny mpanjifa mba hivoatra, injeniera ary famokarana horonan-tsarimihetsika matihanina matoky ny matihanina manerantany.
Posti's newest 4K HDR-Ready monitors are among the most capable of industry thanks to their unique features and innovations. Miezaka mametraka vahaolana manoloana ny mpanjifany ara-teknika, kreôla ary ara-bola izy ireo amin'ny fampiasana ny teknolojia avo indrindra.
Postium dia mazoto manome vahaolana tanteraka amin'ny famoahana ny famoahana sy famokarana horonantsary manaraka, mizara ny fahombiazany amin'ny mpiara-miasa, ary lasa mpitarika manerantany amin'ny fanaraha-maso ny lahatsary matihanina.
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho azafady www.postiumamerica.com na mifandray amin'ny Postium America amin'ny 833-POSTIUM (833-767-8486) na sales@postiumamerica.com.
2015 bitrate fampihenana fampitana injeniera fampitana Engineering CES2017 H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive fampidirana isovideo JCT-VC MStar tabataba fampihenana SoftAtHome Spears & Arrows UHD / 4K / HD viarte Video injeniera Warsaw	2018-10-30
Previous: VITEC dia manatsara ny lahateny, mitarika fiangonana miaraka amin'ny dual-channel multise streaming amin'ny WFX 2018
Next: FAHATSIAROVANA MANOKANA ATSIMO